FALLANQEYN: Barcelona Oo Waqti Xun Kujirta Ka Hor Kulanka El Clasico, Dhaawacyada Luis Enrique Oo Aan Xad Laheyn, Iyo Guud Ahaan Diyaargarowga Kulan Real Madrid | Laacibiin.net
Home » Falanqeyn » FALLANQEYN: Barcelona Oo Waqti Xun Kujirta Ka Hor Kulanka El Clasico, Dhaawacyada Luis Enrique Oo Aan Xad Laheyn, Iyo Guud Ahaan Diyaargarowga Kulan Real Madrid
FALLANQEYN: Barcelona Oo Waqti Xun Kujirta Ka Hor Kulanka El Clasico, Dhaawacyada Luis Enrique Oo Aan Xad Laheyn, Iyo Guud Ahaan Diyaargarowga Kulan Real Madrid	Waqtiga Barcelona ayaa ku dhow inuu soo gabagaboobo Iyada oo Copa del Rey xalay barbaro ay la gashay kooxda Hercules.
Barcelona ayaa haatan diirada saari doonta in ay soo celisop tartanka Horyaalka marka ay soo booqaneyso kooxda Real Madrid Isbuuca dambe.
Madrid iyo Barcelona ayaa hadda waxaa u dhaxeeya farqi lix dhibcood ah horyaalka La Liga ka dib 13 oo la ciyaaray.
Camp Nou kulanka ka dhacaya ayaa muhiim u ah kooxda Luis Enrique, oo barbaro gashay labadii kulan ee ugu danbeysay horyaalka markaasoo ay la ciyaarayeen kooxaha Malaga iyo Real Sociedad ,halka sidookale xalay 1-1 ay la galeen kooxda heerka saddexaad ee Hercules Copa del Rey.
Si kastaba ha ahaatee, kulanka Clasico ka hor waa side xaalada kooxda ka dhisan Catalan, dhaawac, gaanax iyo shakiba.
Barcelona ayaa dhaawacyo joogta ah qabta, laakiin kaliya Jeremy Mathieu ayaa xaqiiq ay tahay inuu seegi doono kulanka El Clasico, iyadoo Jordi Alba, Andres Iniesta iyo Samuel Umtiti dhamaantood la filayo inay diyaar u noqdaan kulanka Real Madrid.
Umtiti ayaa kusoo laabtay kooxdiisa kulankii Copa del Rey ee ka dhanka ahaa kooxda Hercules habeenkii xalay, halka Iniesta uu kusoo laabtay tababarka ka dib markii dhaawac jilibka ah uu soo gaaray dhamaadkii bishii October.
Alba, oo ku dhaawacmay kulankii 1-1 kooxdisia ay la gashay Real Sociedad, ayaa isna shaki uu kujiraa ciyaarata Real Madrid.
Si kastaba ha ahaatee, Barca waa rajo ka leh in ay kusoo nooeyso hamigeeda Horyaalka kulanka El Clasico.
Arda Turan iyo Aleix Vidal ayaa diyaar ah kulanka kooxdooda ay soo dhaweyn doonto Real Madrid.
Luis Suarez ayaa ganaax ku seegay kulankii barbaraha gool la’aanta kooxdiisa ay la gashay Malaga isbuuc ka hor, laakiin weeraryahanka reer Uruguay ayaa kusoo laabtay safka koowaad ee kooxdiisa kulankii Real Sociedad ee axadii hore.
Neymar ayaa hal jaale wali ujira in la ganaaxo, laakiin diyaar ayuu u yahay kulanka El Clasico isagoo ka garab ciyaari doona Suarez iyo Lionel Messi.
Barca ayaan wax ciyaartooy ganaax ah qabin ka hor kulanka El Clasico.
Tababaraha kooxda Barcelona Luis Enrique ayaa doonayainuu shax adag soo xusho kulanka Madrid, laakiin Andres Iniesta ayay u badan tahay inuu kusoo bilowdo kursiga keydka keydka madaama uu shan toddobaad dhaawac jilibka ah ku maqnaa.
Luis Enrique ayaa sahxdiisa kusoo dari kara ciyaaryahanka khadka dhaxe ee Portugal Andre Gomes ciyaarta Madrid.
Dhanka daafaca, Samuel Umtiti ayaa sidoo kale u muuqda mid kusoo bilaaban kara shaxda koowaad kadib markii uu ciyaaray kulankii xalay ee Hercules Copa del Rey Barcelona barbaraha lagu qabtay.
Javier Mascherano ayaa isna macquul ay tahay inuu ka garab ciyaaro daafac ahdaxe Gerard Pique, iyadoo Jordi Alba oo dhibaato ka sheeganaya lagu bedeli karo Lucas Digne.
Kooxda inteeda kale ayaa la filayaa in ay diyara yihiin, Marc-Andre ter Stegen, Sergi Roberto, Sergio Busquets iyo Ivan Rakitic ,Lionel Messi, Luis Suarez iyo Neymar ayaa dhamaan la nasiyay ciyaartii xalay iyagoo diyara u ah kulanka El Clasico.
Link to this post:<a href="http://www.laacibiin.net/wararka/fallanqeyn-barcelona-oo-waqti-xun-kujirta-ka-hor-kulanka-el-clasico-dhaawacyada-luis-enrique-oo-aan-xad-laheyn-iyo-guud-ahaan-diyaargarowga-kulan-real-madrid/">FALLANQEYN: Barcelona Oo Waqti Xun Kujirta Ka Hor Kulanka El Clasico, Dhaawacyada Luis Enrique Oo Aan Xad Laheyn, Iyo Guud Ahaan Diyaargarowga Kulan Real Madrid</a>